Yintoni iBentley kwi-Inspired - Geofumadas
Yiyiphi iBentley ezisa i-Inspired
Ngo-Okthobha, 2010 ezintsha, Microstation-Bentley
Nje kweentsuku ezimbalwa uhambo olude iLondon waza Amsterdam, makhe sihlolisise yintoni kubethelela Danes eli xesha nakuhlangana finalists.
Abagqityiweyo kwisihloko seGeospatial kunye noRhulumente
GeoSite, inkampani yaseDenmark iya kubonisa ukutshaya usebenzisa uxhumano lweselula, ngeenkonzo zewebhu ezisebenzisana ngazo zombini iindlela. Ukususela endle, unako ukufaka idatha efana neefoto kunye xfm zobumnini ukuthunyelwa nge beradiyo Microstation kwaye ukusuka apha phendula kakuhle. Eyona nto ifanelekileyo, yindlela yesicelo kamasipala.
Baya kuzisa i-19 kwi-11 am.
IT Developer, Kwakhona isiDanishi, iya kubonisa ukuphuhliswa kokusetyenziswa kwezidalwa ngokusetyenziswa komgangatho I-Service Feature Feature (WFS).
Oku kunomdla, becinga ukuba oku kusebenza, kuya kufuneka ukuba ufake idatha kwi-Geospatial Server nge idpr (ngethemba kwaye ayikho ngeProjekthi ehlakaniphile). Bekuya kuba kunye izicelo yokuqala xfm xhaphaza eli umgangatho, yaye yiloo ndlela ngenxa yokuba kude kube ngoku xfm uhlala into Bentley ethile kakhulu nangona kuthatha iminyaka emininzi ukuba zikhona nokuxhasa umgangatho. Imephu Service Web wabonwa njengento eqhelekileyo kakhulu ukuba kulungile Spanish akubonise imaphu njengento umfanekiso kunye ukhetho umlinganiselo wokuhlaziya; kodwa WFS kubandakanya eze umaleko kumda wesangqa kunye netafile yayo attribute phantsi OGC ezinokubona nayiphi na inkqubo njengoko ArcGIS, gvSIG, njl
Bobabini baya kwenza i-half-hour presentation ye-19 ka-Oktobha phakathi kwe-11 kunye ne-12 yesiqingatha somhla. Ndiyicinga ukuba isiNgesi siya kuzwakalisa ngakumbi isiJamani, njengalezo ncwadi ze-Asterix eJamani. Tvilum Landinspektørfirma.
Omnye umgcini wokugqibela naye u-Danish, okhuphisana nomzekelo wakhe we-3D kwi-fly. Kubonakala ngathi abayi kubakho umboniso, kodwa baya kuthatha inxaxheba kuyo itafile.
Ngokombono wam, iWFS ithatha umvuzo.
Ukususela kwimimandla yaseLatin America, kuphela iVenezuela neBrazil, bobabini kwintsimi yezityalo zokuvelisa amandla; Bonke kunye ne-United States, bongeza i-11 kwilizwekazi laseMerika. Ezinye zivela eYurophu 21, 14 Asia, 2 Afrika 1 Oceania njengoko kubonisiwe kule theyibhile ilandelayo.
EUnited States (10)
IRiphabhlikhi yaseCzech (2)
ENew Zealand (1)
Kalokunje ndiza kukhankanya iindidi kunye neenkampani ezikhethiweyo. Akukho nto inenjongo yokufaneleka ... kunye neendlela.
I-AAPROG isakhiwo se-bvba
Iqela leProjekthi yokuxhuma
UHenning Larsen Architects
UMcCauley Daye O'Connell Architects Ltd
Izinto ezintsha kwiiKampu, iiApeports, kunye neeNdawo zoMkhosi
Intsha kwiNethiwekhi zoNxibelelwano
I-Precision Contracting Services, Inc.
Ifowuni yeO2 Czech Republic
Igunya loThutho loMhlaba
ISebe leSebe lezothutho laseNew York
I-State Geological Institute yeDionyz Stur
Izinto ezintsha kwiMetals neMining
Ukuveliswa kweMandla eNkcubeko
I-ECIDI - Isitishi Sokugcina Isixhobo Sokugcina
ESI Inc. yaseTennessee
Innovation kwinkqubo yokuThengisa
Innovation kwiThuthi kunye neThuthi
Iprojekthi ye-AECOM-Neasden Depot Upgrade
I-SREI yeZibonelelo zeMali zeMali
I-Aurecon - SH18 I-Hobsonville Ukuphambuka
Iphunga eSingapore Pte Ltd
I-MSN Prestressed Concrete
I-Y & V yobunjineli kunye no-CA
Innovation kwi-Intanethi yokuThunywa kunye neNethiwekhi zoLwazi
ICentral Southern China Power Power Design Institute
I-Nuclear Electric Power Planning Design kunye neCandelo loPhando
Ukutsha kwamanzi kwiMithombo yamanzi kunye noTywala
Ubungqina bamanzi, Amanzi amdaka, kunye neeNkcazo zamanzi aManzi
I-American Amanzi yase-Arizona kunye neNarasimhan Consulting Services, Inc.
Post edlulileyo«Edlulileyo Geofumed kwiifoto eziphantse
Post Next Ukushicilela kwiDailyOkulandelayo "